3 Na 1 Nweta NC Servo Straightener Feeder China Manufacturer
Nkọwa:3 N'ime Ndị na-enye 1 Straightener,NC Servo 3 Na 1 Straightener,Nweta Onye Nweta Pụrụ Igha
Home > Ngwaahịa > Decoiler Straightener Feeder > Inye Nri na Ngwunye Aka > 3 Na 1 Nweta NC Servo Straightener Feeder
Ihe Nlereanya.: MAC1-300
Mkpịsị akwụkwọ nri na Design oghere. Azịza dị ọnụ ahịa.
3 n'ime 1 NC servo akpaka mpempe akwụkwọ coem stamping feeder machine decoiler straightener feeder maka ụgbọ ala chassis akụkụ mmepụta ahịrị
Mayflay 3 na 1 ụgbọ ala mapụtara n'ihu kọlụm stiffene akụkụ punching system decoiler straightener cum NC Servo feeder maka auto akụkụ mmepụta akara.
MAC1-400 NC Servo 3 Na 1 Straightener Feeder Uncoiler na -arụ ọrụ na ụlọ ọrụ ndị ahịa anyị.
NC Servo 3 na 1 Straightener Feeder Uncoiler maka idozi ahịrị ụzọ nkedo ígwè.
Nke a bụ otu n'ime ndị ahịa anyị na Slovenia, ha na-arụpụta akụkụ mpempe akwụkwọ na NC serv o 3 na 1 jikọtara nri nri kwụ ọtọ .
M ayflay ụlọ ọrụ na-a elu àgwà emeputa niile ụdị eriri igwe Ijikwa Equipment na Press udia ngwá na China. Ndị na-emepụta Decoilers dị iche iche , Straighteners na ndị na- eri nri Servo , ma nwee ike ịnye ọmarịcha ngwakọta nke 2 n'ime 1 ndị na-eme ihe ndozi na ndị na-ahụ maka ọkụ , na-enwekwa ọmarịcha kọmpụta kọmpụta kọmpụta nke ga-ebelata mbara ala ma meziwanye eri oge n'ụzọ dị arọ coils.
Maylọ ọrụ Mayflay na-amụ teknụzụ ndị Japan ma jiri ụkpụrụ dị elu dị na nhọrọ akụkụ, usoro mgbakọ na akụkụ ahụ, na-elekwasị anya na ịchepụta ma na-enye ihe ngosi, Ngwọta Igwe Ngwọta Cost na- akwụ ụgwọ na akpaaka Stamping Stamping Line . Mayflay tolitere na teknụzụ mbepụ na ọrụ nlebara anya. Mayflay na-enye otu nkwụsị iji dozie nsogbu nke inye eriri ọkpọkọ n'ime ụlọ mgbasa ozi nke ọma, na ịba ụba ngwa ahịa. Taa, Mayflay bụ ụlọ ọrụ raara onwe ya nye nke na-egosipụta akụrụngwa nke nwere ezigbo aha, ikike ọrụ, njikwa ọgbara ọhụrụ, netwo ahịa dị ukwuu, na ahịa dị egwu.
Nkọwa ngwongwo: ikpe osisi
Nkọwapụta mbata: ụbọchị 30-70
Zọ mbupu: mbufe mmiri
1. you ga-enye ọrụ OEM / ODM?
Anyị na-enye ọrụ OEM maka ndị asọmpi anyị si mba Europe na ụlọ ọrụ Janpan.
2. Kedu asambodo ị nwetara?
Ngwaọrụ anyị bu ISO9001 gosipụtara. Anyị nwetara asambodo CE maka ngwaahịa ndị ahụ.
gụnyere Feeder igwe, igwe uncoiler, igwe eji achọ mma, igwe akuko nke di elu na wdg.
3.Gini bu oge mbufe diri igwe anyi?
Onye na-enye nri, igwe uncoiler bụ 1-20 ụbọchị ọrụ.
Igwe eji akuko ngwa ngwa di elu bu 5-35 nke ubochi.
Decoiler straightener feederer 3 na 1 igwe bụ 15-65workdays.
Uncoiler straightener 2 na 1 igwe bụ 1-25 ụbọchị ọrụ.
Oge ụfọdụ, igwe anyị nwere ngwaahịa.
4.Gịnị bụ njikwa ogo dị n'ụlọ ọrụ?
Anyị na-enyocha igwe ahụ dịka ọkọlọtọ ISO 9001 ma nwalee igwe ahụ tupu oge ahụ.
nnyefe ma anyị na-eme igwe anyị nwere akụrụngwa CNC na ụlọ ọrụ anyị. Ngwa igwe anyị bụ nke dị elu.
Ndị na - enye nri Cost - Straighteners Kpọtụrụ ugbu a
Ngwunye nri 3-IN-1 Kpọtụrụ ugbu a
3 N'ime Ndị na-enye 1 Straightener NC Servo 3 Na 1 Straightener Nweta Onye Nweta Pụrụ Igha 3 n'ime 1 Nc Servo Straightener Ndị na-enye nri Servo Straightener Akpaaka 3 n'ime 1 Ndị na-enye nri Ndị na - enye nri Cost - Straighteners Ndị na-enye nri Servo Coil Straightener